သက်တန့်ချို: ၀မ်းသာရပါတယ် ဧရာဝတီရယ်
ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ပျက်ဆီးမယ့်အရေး တွေးတွေးပြီး ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိုးရိမ်ပူပန်သောကတွေ များခဲ့ရပါတယ် ။ ၀မ်းသာ စရာသတင်း.. . မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းတော့မယ်တဲ့ ။ မယုံရဲသေးပါဘူး ဒါနဲ့ အစိုးရက အတိအ လင်းသတင်းကြေငြာချက်ကို စောင့်နေတုန်း အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ
“ မိမိတို့ အစိုးရလက်ထက် မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားမည် ”
ဆိုတဲ့ သတင်းကို ခေါင်းစီးကြီးနဲ့ ဖတ်လိုက်ရ တဲ့အတွက် အလွန်အမင်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ် ။ တထိတ်ထိတ် မက်ခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီရဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေ နံနက်ခင်းနေရောင်ခြည်ရဲ့ လင်းဖြာမှုနဲ့ အတူ ဝေး လွင့်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါပြီ ။
“ မိမိတို့အစိုးရသည် ပြည်သူမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့်အစိုးရဖြစ်၍ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒကို အလေးထား ၊ ပြည်သူ များ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အလေးထားဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်တာဝန်ရှိ ”
ဆိုတဲ့ အစိုးရသစ်ရဲ့ စကားကိုကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်အတွင်းသဏဏ္ဍာန်တွေထဲမှာ မြူတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်နေ တဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တဖျက်ဖျက်လင်းလက်လာခဲ့ရသလိုပါပဲ ။ အဲဒီပေးပို့ချက် သ၀ဏ်လွှာ အပိုဒ် ၈ ကို ပြန် လည်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်
“ နှစ် ၃၀ လျှပ်စစ်မဟာ ဗျူဟာ စီမံကိန်းအရ နောက်ထပ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၆၄ ခုနှင့် ကျောက်မီးသွေး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ ၃ ခုအပါအ၀င် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရန် စက်တပ်ဆင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄ သောင်းကျော် ထုတ် လုပ်နိုင် သည့် အလားအလာများရှိပါသည် ။ အဆိုပါ စီမံကိန်းများတွင် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မေခ ၊ မလိခ မြစ်ညာမြစ်ဝှမ်းနှင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ၈ ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည် ”
လို့ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် ။ ဒါကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာ နှစ် ၃၀ လျှပ်စစ်မဟာ ဗျူဟာ စီမံကိန်း ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဟိုးယခင်ထဲက Planning တွေလုပ်ထားကြောင်းသိနိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ကို အောက်ပါအတိုင်းဖော် ပြထားတာတွေ့ ရပါ တယ် ။
“ (၁) ကချင်ပြည်နယ်အတွက်သာမက မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါ သဘာဝကပေးထားသော ( Land Mark ) ဖြစ်သည့် မြစ်ဆုံ သဘာဝ အလှအပပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ခြင်း ၊
(၂) မြစ်ညာပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများ ရေနစ်မြုပ်၍ ၄င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ဆုံးရှုံးပျက်ဆီးသွားနိုင်ခြင်း ၊
(၃) ပုဂ္ဂလိကများမှ ငွေကြေးအရင်းအနှီးများစွာ စိုက်ထုတ် ၍ စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးထား သည့် ရော်ဘာ စိုက်ခင်းများနှင့်ကျွန်းစိုက်ခင်းများ ပျက်စီးသွားနိုင်ခြင်း ၊
(၄) ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် မြောက်ဖျားရှိ ရေခဲတောင်များ အရည်ပျော်ခြင်း ၊ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်း ၊ အင်အားပြင်းထန်သည့် ငလျင်လှုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါက မြစ်ဆုံဆည် ပျက်စီးပြီး ဆည်အောက် ပိုင်းရှိ မြို့ရွာများနှင့် ပြည်သူများ သေကျေပျက်ဆီးမှု ရှိနိုင်ခြင်း ၊
(၅) ဧရာဝတီမြစ်ကြီးထိခိုက်ပျက်ဆီးနိုင်ခြင်း ”
ဟုတ်ပါတယ် ။ တသွေမတိမ်းပါပဲ ။ ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတာ ဒီထက်ပိုတဲ့ အချက်တွေသာ ရှိချင်ရှိမယ် မလျော့ ပါဘူး ။ ဒါကို ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်တဲ့ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ပြည်တွေကိုယ် စားပြည်သူတွေ ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ရင်ဘတ်ထဲ ၀င်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ။ ဖြစ်သင့် တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားရတာမို့ ဧရာဝတီအတွက် လတ်တလော စိတ်အေးရပါပြီ ။ ဒီနေရာမှာ လတ်တလော လို့ ပြောရတာ အကြောင်းရှိပါတယ် ။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဖျက်သိမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ရပ်ဆိုင်း ထားတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ ။ ဒါဆို တစ်ချိန် ဆက်လုပ်ကြဦးမှာလား ...ဒါမှမဟုတ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ဦးမှာလဲ အတွေးပေါင်းများစွာက ဆက်လက်ရှိနေဦးမှာပါ ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်တွေ လွတ်လပ်ပေါ့ ပါးခဲ့ရပါပြီ ။
နောက်တစ်ချက်က “ အန္တရာယ်မရှိနိုင်သည့် အခြားသော ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကိုသာ စနစ်တ ကျ လေ့လာဆန်းစစ်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည် ” လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ။ သဘာဝ အရင်းအမြစ်အလှအပတွေနဲ့ စီမံကိန်း တစ်ခုကထွက်လာမယ့်ဆိုးကျိုးတွေ ၊ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားတွေ ၊ နောက်ဖြစ်လာမယ့် Consequences တွေကို ချိန်ထိုးတွက်ဆပြီးမှ အန္တရာယ်အကင်းဆုံး စီမံကိန်းတွေကို သာဆက် လက်လုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။
ဆက်လက်ပြီး ပြည်သူတွေရင်ထဲဝင်မကြည့်ပဲ ထင်ရာစိုင်းကြမယ့် လူတွေကိုလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး မျက်လုံးတွေဖွင့် နားတွေစွင့်နေ ကြပါဦးမယ် ။
- နိုင်ငံတော်၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နှောက်ယှက်သော ပြည်ပနိုင်ငံများအား ဆန့်ကျင်ကြ ။
- နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးတစ်ရပ်လုံးကို ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိရေး
စတဲ့ အချက်လေးတွေ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အလေးထား ထိမ်းသိမ်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဧရာဝတီအရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပြည်သူတွေဖက်က အမြဲရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ EMG ၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကနေ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို အမြတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အမေစု (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) ၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ အနုပညာရှင်များ ၊ စာရေးဆရာများ ၊ ဧရာဝတီကိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်း ပို့စ်တွေကို စည်းလုံးညီညွှတ်စွာ ဘလော့ဂ်တွေ ကို တင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ဘလော့ဂါအသီးသီးကို ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးကိုယ်စား အထူးပဲ ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ် ။ အုတ်တစ်ချုပ်သဲတစ်ပွင့်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ရခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုအနေနဲ့လည်း အမြဲဂုဏ်ယူပါတယ် ။ နောက် လည်း အရေးကြုံလာပါက ကျွန်တော်တို့အားလုံး သွေးစည်းညီညွှတ်ကြပါစို့ ။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းပါစေဟု တောင်းဆုများ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုရင်း . . . . .
Posted by သက်တန့်ချို at 12:47 PM
မြသွေးနီ October 3, 2011 at 2:49 PM
ဧရာဝတီအတွက် တကယ့်ကို ၀မ်းသာရပါတယ်..။
ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်မှန်ကန်ကန်ချခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ တစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်...။
အားလုံးနဲ့ အတူ ဝမ်းသာ ရပါတယ်
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! October 3, 2011 at 5:47 PM
ဧရာဝတီနဲ့အတူ အားလုံးလည်း ထပ်တူ ဝမ်းမြောက်မိကြောင်းပါအကို ....
ဆူးသစ် October 3, 2011 at 9:29 PM
အခုတရုတ်သံအမတ်ကြီးကစပြီးခေါ်နေတဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲ ကျော်လွှားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူက သူတို့တရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်ကနစ်နာလို့တဲ့။ ဧရာဝတီအတွက်ဝမ်းသာနေတုန်းမှာထပ်ဝင်လာတဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ပေါ့။ စခဲ့ပြီးမှတော့လည်း အဆုံးတော့သတ်ပေးရလိမ့်ဦးမှာပေါ့။ အစကတည်းက သေသေချာချာမစဉ်းစားခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေက နောက်လူတွေမှာ လာပိနေပြီလေ။
blackroze October 4, 2011 at 2:15 AM
မမဟန်နီ October 4, 2011 at 3:10 AM
ဧရာဝတီရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တာဝန်သိသိဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအားလုံးကိုလဲလေးစားပါတယ်။ နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရလဲဒီအစီအစဉ်ကိုထပ်အကောင်အထည်မဖော်ဖို့ တော့ ဆုတောင်းရမှာပါပဲ။